महिलाको दुष्मन थायराइड • nepalhealthnews.com
महिलाको दुष्मन थायराइड
जनस्वास्थ्य सरोकार || प्रकाशित मिति :2018-05-25 06:30:07
डा. ज्योती भट्टराइ (कुँवर), वरिष्ठ हर्मोन विशेषज्ञ, मेट्रो काठमाडौं हस्पिटल
थायराइड ग्रन्थी घाँटीमा उत्पादन भएर शरीरका विभिन्न अंगमा रहेका कोषिकामा पुगेर काम गर्ने भएकाले यसको महत्वपूर्ण भूमिका छ । हाम्रो शरीरका हरेक अंगका एक एक कोषमा अक्सिजन र ग्लुकोज आदिको रसायनिक क्रियाहरु भइरहेको हुन्छ । त्यसलाई मेटाबोलिक (शक्ति) दिने काम थायराइड हर्मोनले गर्छ । यसले शरीरका हरेक कोषहरुलाई उर्जावान गराइराख्छ र चाहिने शक्ति प्रदान गरी सम्बन्धित अंगलाई सक्रिय गराउने र यसको कार्य सुचारु राख्छ । पुरुष भन्दा महिलामा मोटोमोटी रुपमा १९ गुणा बढी देखापर्छ ।
थायराइड हर्मोन घटेको अवस्थालाई हाइपोथायराडिज्म भनिन्छ । यसरी थायराइडको उत्पादन कम (हाइपोथाइराडिज्म) भएमा शरीरका कोषहरुमा थायरोइड हर्मोन टी थ्री र टी फोर को मात्रा कम हुन्छ । कोषहरुलाई आवश्यक मात्रामा मेटाबोलिज्म (क्रियाशिलता) को मात्रा पुग्दैन ।
– अल्छी लाग्ने
– उठ्न मन नलाग्ने
– वजन बढ्ने
– मुटुको धड्कन कम हुने
– थाक्ने, गल्ने
– महिनावारी गडबडी हुने आदि ।
थायराइड हर्मोन बढेको अवस्थालाई हाइपर थायराइडिज्म भनिन्छ । थायराइड हर्मोन बढेमा शरीरका कोषहरुको मेटाबोलिक (क्रियाशिलता) दर बढाउँछ । मेटाबोलिजम दर उच्च भएपछि भोक लाग्छ, धेरै खाना रुच्छ तर मान्छे मोटाउँदैन, दुब्लाउँछ । थायराइडको ठूलो काम शरीरको तापक्रम ३७ डिग्री सेन्टिग्रेडमा कायम राख्नु हो । कोषमा टी थ्री र टी फोर धेरै भएपछि त्यहाँ शक्ति भण्डारण हुन पाउँदैन । धेरै तापक्रम हुने भएकाले शरीररको बोसो पग्लिन्छ र दुब्लाइन्छ ।
– भोक लाग्ने
-कपाल झर्न थाल्ने
– चिडचिडापन हुने
-हात खुट्टाहरुबाट पसिना आउने
– बढी तातो महसुस हुने
-मुटुको धडकन बढ्ने
– हात काप्ने
ल्याव जाँचका आधारमा कुन थायराइड हो भन्ने पत्ता लगाउनुपर्छ । यसलाई सम्बन्धित डाक्टरले नै पहिचान गर्नुपर्छ ।
कति लेवललाई नर्मल मानिन्छ ?
थायराइडमा टि फोर वन, टी थ्री वन र टिएसएच हर्मोनहरु नर्मल लेवलभित्र भएको राम्रो हुन्छ । त्यसभन्दा बढी गडबड भएमा डाक्टरले नै परीक्षण गरेको राम्रो हुन्छ । मोटामोटी रुपमा टिएसएच १–५ को बीचलाई सामान्य मानिन्छ । तर यसलाई मात्र हेरेर हुँदैन, टी फोर र टी थ्री हर्मोन पनि हेर्नुपर्छ ।
औषधि घटाउने र बढाउने अवस्था
यो बिरामीमा भएको थायराइडको अवस्थामा भर पर्छ । यसको स्टैन्डर्ड प्रोटोकल हुन्छ । त्यहि आधारमा औषधि बढाउने र घटाउने गरिन्छ । कति हप्तामा फलो गर्ने ? औषधि कति मिलाउने ? गर्भवती अवस्थामा कसरी गर्ने ? बृद्धबृद्धालाई कसरी गर्ने भन्ने अवस्था अनुसार निक्र्योल गरिन्छ । यो डाक्टरले निक्र्योल गर्छन् ।
औषधिको मात्रा घटाउँदा र बढाउँदा कुनै शारीरिक असर पर्छ ?
औषधिको मात्रा घटाउँदैमा र बढाउँदैमा कुनै पनि शारीरिक असर पर्दैन । यो सम्बन्धित चिकित्सकको रेखदेखमा गर्नुपर्छ । रिपोर्टको आधारमा कस्तो अवस्थाको विरामीलाई सम्बन्धित औषधिको मात्रा कति चाहिन्छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ ।
चाँडोचाँडो जाँच गर्न आउनसक्ने अवस्थामा के गर्ने ?
गर्भवती हुन खोज्ने महिलाहरुलाई चाँडो जाँच्नुपर्ने अवस्था भएमा नजिकैको शहरमा बोलाएर फोनबाट पनि रिपोर्ट एडजस्ट गरिदिनुपर्छ । अन्यथा छिटो छिटो उछिटिने थेचारिने भन्ने हुँदैन । दुरदराजमा बसेकाहरुले छिनको छिनमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन । सामान्यतया औषधिको लेवलमा बसेको हाइपोथायराइडका बिरामीले वर्षमा एक पटक जाँच गर्न सकिन्छ ।
थायराइडका बिरामी नआत्तिन सल्लाह
यसका लागि सम्बन्धित डाक्टरहरुलाई पनि यो सम्बन्धी तालिम कक्षा लिन आवश्यक छ । डाक्टर र नर्सले यसलाई रिल्याक्स तरिकाले लिनुपर्छ । यो खतरामुलक होइन । आत्तिहाल्नुपर्दैन ।
थायराइडको समस्या दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसको पहिचान पनि भइरहेको छ । सन् २००७ देखि निरन्तर नेपालमा गरेको अभ्यासले हरेक रोगमा चेतना बढेको छ । तर लिटल नलेज इज डेन्जरस भने जस्तो बुझेर पनि केही व्यक्ति अत्तालिने प्रवृत्ति हावी छ । तर आत्तिनु पर्दैन ।
महिला र पुरुष मध्ये कसलाई बढी हुन्छ ?
बढी महिलामा पाइन्छ । तर पुरुषमा पनि पाइन्छ ।
थायराइड दिवशको जरुरत भएको हो ? राज्यले कुन रुपमा लिनुपर्छ ?
राज्यको धेरै जिम्मेवारी छ । यो लग्जरियस रोग हो । राज्यले यसमा पनि ध्यान पु¥याउनु पर्छ । विकटमा बस्ने जनताले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि प्राप्त गर्नुपर्छ र थाइरायड जस्ता नसर्ने रोग उपचारको पहुँच पनि बढाउनुपर्छ । मुख्य कुरा महिलाको स्वास्थ्यमा पहुँच बढोस् भन्ने चाहना हो । हरेक बच्चाको थायराइड जाँच गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । थायराइडको कमीले बच्चाको शारीरिक विकास विथोलिदिन्छ । थायराइड टेस्ट भएमा बढ्दो सुस्त मनस्थितिको समस्या घटाउन सकिन्छ ।
विवहा भएका र नभएका मध्ये कसलाई बढी हुन्छ ?
यसको मतलव हुँदैन ।
थायराइड भएका ब्यक्तिले बच्चा जन्माउन हुन्छ की हुदैन ?
थायराइड भएका महिलाले डाक्टरको रेखदेखमा बच्चा जन्माउनु पर्छ । ताकी बच्चालाई चाहिने अत्यावश्यक तत्व भ्रूणमा हुँदानै पाउनुपर्छ । अन्यथा राम्रो मानिदैन । यो हाइपर र हाइपो दुवैमा लागू हुन्छ ।
जिन्दगीभर औषधि खानु पर्छ ?
गर्भवती हुने महिलाहरुले बच्चा नहुन्जेल त खानै पर्छ । तर अन्य कतिपयलाई रिकभरी भएर औषधि छुटाउन पनि सकिन्छ । धेरै व्यक्तिलाई सँधै औषधि खानुपर्छ । यो व्यक्तिको अवस्था अनुसार हुने गर्छ । हल्का खालको थायराइडमा औषधिले निको भएपछि औषधि छाड्न पनि सकिन्छ ।
उच्च रक्तचाप र थाइराइडको सम्बन्ध
यसको सम्बन्ध कहिलेकाही हुन्छ । राम्रो उपचार नभएको थाइराइड सँगै उच्च रक्तचाप पनि देखिनसक्छ । यो समस्या हाइपर र हाइपोथायराइड दुवैमा देखिन सक्छ । उपचार गरेपछि सुधार हुन्छ । त्यसैले सरकारले अञ्चल अस्पतालमा पनि थायराइड टेस्टको सुविधा उपलब्ध गराउन सके भने सहज तरिकाले उपचार गर्न सकिन्छ । यो सेवा हरेक जिल्ला अस्पतालमा हुनुपर्छ । मोटोपन थायराइडका बिरामीले मात्र नभएर सबैले घटाउनुपर्छ । स्वस्थ रहन पेटको गोलाइ घटाउनुपर्छ ।
(डा. भट्टराई महाराजगञ्ज चोकस्थित मेट्रो काठमाडौं हस्पिटलमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्यारोपण सम्मेलन भव्यताका साथ सम्पन्न
आज विश्व हिमोफिलिया दिवस २०१९ः ‘पहुँच र पहिचान’ भन्ने मूल नाराका साथ मनाइँदै
हिमोफिलिया निःशुल्क उपचार नीतिमा छ तर उपलब्ध छैन